एन्फा कथाः नेता फेरियो ब्यथा फेरिएन ! | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति ६ चैत्र २०७५, बुधबार २०:३० लेखक नेपाली जनता
विराटनगर । भनिन्छ सोचले संसार जित्न सकिन्छ । तर त्यसका लागि नेतृत्व लिन सक्ने क्षमता भने हुनुपर्छ । त्यही क्षमता नभए दुःख पाइन्छ । नेपाली खेलकुदको पीडा योभन्दा कम छैन । हुँदाहुँदा परिवर्तनको नारा लिएर उफ्रिँदै अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फामा कब्जा जमाएकाहरूको हालत पनि त्यही देखिएको छ । त्यस्तै ब्यथा पोख्ने ठाउँ भएको छ विराटनगर । पहिलो पटक काठमाडौं उपत्यका बाहिर विराटनगरमा भएको सबैभन्दा ठूलो फुटबल प्रतियोगिता पाँचौं महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगितामा आएका गुनासाहरू सुन्ने हो भने नेता फेरियो ब्यथा फेरिएन भन्न करै लाग्छ ।
६ वटा टीमहरूबीच जारी प्रतियोगिता पहिलो पटक मोफसलमा भइरहँदा त्यसका लागि एन्फाका पदाधिकारीहरू व्यवस्थापनका लागि निकै चनाखो हुनुपर्ने थियो । तर बस्ने होटल कमसल भएको भन्दै आयोजकको जमेर आलोचना गर्न भ्याए बाँकी दक्षिण एसियाली टिमहरूले ।
सबैभन्दा बढी चित्त दुखाइ भुटानी टिमको रहेको खबर छ । भुटानी टिमका म्यानेजरले त खुलेआम संचारकर्मीहरूलाई भनिदिए–‘खेल खेल्नुअघि हामी होटल सरिरहेका थियौं । अघिल्लो दिन बसेको होटल बिजोग थियो । उजुरी गरेपछि फेरि अर्को होटल दिइयो । त्यो पनि सन्तोषजनक छैन । अहिलेसम्म विदेशमा खेलेका खेलमा यस्तो समस्या भोग्नु परेको थिएन ।’
एन्फा प्रवक्ता एवं प्रतियोगिता प्रचारप्रसार संयोजक किरण राईका अनुसार एन्फाले सबै राम्रो व्यवस्था गरेको छ । कसैले कम्प्लेन गर्ने ठाउँ छैन । राम्रो स्थान भएकाले गर्दा कसैबाट पनि कम्प्लेन नआएको उनको दावी छ । भुटानी टिमको गुनासोबारे उनले भने –‘उहाँहरूलाई त्यस्तो कुनै समस्या भएर बुझाइमा फरक प¥यो होला । हामीले कुनै पनि टिमलाई कुनै पनि किसिमको गुनासो नपर्ने गरी व्यवस्थापन गरेका छौं ।’
चैतमा यसै पनि विराटनगरजस्तो स्थल गर्मीस्थल हो । जहाँ फुटबलका प्रतियोगिता आयोजना गर्नु कम चुनौती पक्कै हैन । त्यस्तो गर्मीमा खेल्नु चुनौती नै हो । त्यसमाथि व्यवस्थापन कमजोर भइदिँदा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा छवि बिग्रने सम्भावना बढी हुन्छ ।
काठमाडौंमै भइरहने प्रतियोगितामा समेत एन्फाले अन्तर्राष्ट्रिय टिमका गुनासो भोग्दै आएको छ । जबकि काठमाडौंमा एकसे एक होटल छन् । त्यही किसिमको सुविधा विराटनगरमा पक्कै छैन । तर मात्र ६ टिमका लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो ।
एन्फामा कुनै पनि कमजोरी हुँनासाथ भ्रष्टाचार भएको शंका गरिन्छ । काठमाडौंमा भएका प्रतियोगितामा पहिले महङ्गो होटलमा राख्ने व्यवस्था गर्ने अनि बढी कमिशन आउने भएपछि रातारात होटल परिवर्तन गर्ने गलत काम हुँदै आएको थियो ।
विशेषगरी यस्तो काम गणेश थापाका पालामा बढी नै भएको सुनिन्थ्यो । कतिपय अवस्थामा गणेश थापाले थाहा नै नपाउने गरी पनि उनका चम्चाहरूले गरेको चर्चा चलेकै हो । त्यसमा पदाधिकारी पनि सामेल भएर लाखौं रुपैयाँ कुम्ल्याउँदै आएको आरोप पनि लागेकै हो ।
अहिले विराटनगरमा पनि त्यो काम भएन होला भनेर भन्ने अवस्था पनि छैन । एक फुटबलका भुक्तभोगी जो हरेकजसो फुटबल प्रतियोगितामा भेटिने समर्थकले साँघुसंग भने, ‘एन्फामा नेता फेरियो ब्यथा फेरिएन । काठमाडौंमा नेपालको प्रदर्शन कस्तो हो भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो यता त कसरी बस्ने होला भन्ने चिन्ता हुँदो रहेछ ।’
प्रचार गर्ने बेलामा ठूलो धनराशी खर्च गरेर स्टयाण्डर्डस्तरको भएको बताउने तर व्यवस्थापन फितलो गरेर बेइज्जत गर्ने काम भएको गुनासो उनको छ । एन्फा पदाधिकारीहरूमा पनि एउटै भनाइ छैन । एक ललितपुरे क्लबका पदाधिकारीले भने, ‘म कुन क्लबको प्रतिनिधि हुँ भनेर चिनाइरहनु परेन तर वास्तवमा भन्ने हो भने यो प्रतियोगिताबाट नराम्रो बाहेक केही सिक्न पाइएन ।’
टिमहरूले बस्नको मात्र होइन खानामा समेत गुनासो गरेका छन् । नेपाली टिमको हकमा समेत यो लागू हुन्छ । केही संचारकर्मीले पनि प्रतियोगिताको स्तरअनुसार व्यवस्थापन नभएको बताएका छन् । एक खेलाडीले ‘प्लिज नाम नलेख्नु है’ भन्दै जनाए–‘हामीले नै कम्प्लेन ग¥यो भने हामीलाई कार्वाही होला तर हामी सन्तुष्ट छैनौं ।’
परिवर्तन नारामा मात्र हैन व्यवहारमा पनि उतार्नु पर्नेमा एन्फाका एक पदाधिकारी (जो पहिले गणेश थापाका नजिक मानिन्थे) ले बताए । उनले भने, ‘साथीहरूले परिवर्तन भने हामीले पनि स्वीका¥र्यौं । तर आफू निकटकालाई बढी जिम्मेवारी दिने र हामीहरूलाई पाखा पार्ने खेल भइरहेको छ यो गलत छ । एउटै टिममा भएर पनि नजिक र टाढाको नजरले हेर्न थालिएको छ ।’
गणेश थापा भ्रष्टाचारको आरोपमा एन्फाबाट बाहिरिनु परेको थियो । अहिलेको टिमले थोरै रकम नै किन नहोस् अनियमितता गर्ने हो भने गम्भीर प्रश्न खडा हुनेछ । एन्फामा पाएपछि कसले खाँदैन भन्ने मानसिकता राख्ने हो भने अझै धेरै बाटो हिँड्नु छ कि त बाटो अप्ठेरो पर्ला या त खुट्टामा समस्या आउला ।
महाभारत युद्ध के हो ?
महाभारत हिन्दूहरूको एक प्रमुख काव्य ग्रन्थ हो, जसलाई स्मृति वर्गको ग्रन्थ मानिन्छ। यस ग्रन्थलाई इतिहास ग्रन्थ पनि भन्न सकिन्छ।…
एकदिवसिय मान्यता पाएको नेपाली टोली स्वदेश फिर्ता
नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय एक दिवसीय मान्यता दिलाएर घर फर्केका नेपाली क्रिकेट टोलीलाई त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा भव्य स्वागत गरीएको छ ।
काठमाडौं । आज देशभर मेघ गर्जन र चट्यांगसहित वर्षा हुने मौसमविदले बताएका छन् । देशको मध्य तथा पश्चिमी भूभागका…